Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » IATA dia nanonona ny lehiben'ny toekarena vaovao
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
IATA dia nanonona ny lehiben'ny toekarena vaovao.
Marie Owens Thomsen dia hanatevin-daharana ny IATA ho Lehiben'ny Toekarenany manomboka ny 4 Janoary 2022.
Owens Thomsen dia ho avy ao amin'ny Banque Lombard Odier, izay toerana naha-lohan'ny Global Trends and Sustainability azy.
Owens Thomsen dia manana mari-pahaizana PhD amin'ny Toekarena Iraisam-pirenena avy amin'ny The Graduate Institute any Genève ary MBA mitovy amin'ny University of Gothenburg ao amin'ny International Economics and Business.
Mitana zom-pirenena amerikana, UK ary Soisa izy, niasa tany Angletera, Frantsa ary Soisa ary mahay miteny Soedoà, Anglisy ary Frantsay.
The Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nanambara fa i Marie Owens Thomsen dia hiditra ao amin'ny Fikambanana ho Lehiben'ny Toekarenany manomboka ny 4 Janoary 2022.
Owens Thomsen dia ho avy ao amin'ny Banque Lombard Odier, izay izy no lehiben'ny Global Trends and Sustainability nanomboka tamin'ny 2020. Talohan'izay dia izy no Lehiben'ny Global Intelligence Investment (2011-2020) nandritra ny fotoana ela tao amin'ny Indosuez Wealth Management. Ho fanampin'izany, dia niasa tao amin'ny Chief Economist izy ary andraikitra mifandraika amin'i Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson ary HSBC. Ahitana asa fandraharahana sy fampivoarana tsena ihany koa ny asany isan-karazany.
"Ny asan'i Marie momba ny olana ara-toekarena macro izay mifantoka amin'ny faharetana dia hanomana azy hamaha ny olana lehibe indrindra amin'ny fiaramanidina - dia ny fanarenana ny COVID-19 sy ny faharetana. Avy any ivelan'ny sehatry ny fiaramanidina izy, hitondra hevi-baovao sy fomba fijery sarobidy. Ary matoky aho fa hanohy ny lazan'ny IATA ho an'ny tatitra sy famakafakana tanjona izay ilaina amin'ny fanazavana ny fandraisan'anjaran'ny fiaramanidina amin'ny toekarena manerantany sy ny fisoloana vava ho an'ny polisin'ny zotram-piaramanidina tokony hahomby, ”hoy izy. Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
“Miditra aho Iată mba handray anjara amin'ny sehatry ny fiaramanidina izay nitarika ny fitomboana ara-toekarena naharitra ela. Hanao izany aho amin'ny fomba fikarohana izay mamaritra ny antony mahatonga ny olana lehibe sy ny vahaolana tena laharam-pahamehana. Zava-dehibe izany satria ny fiaramanidina dia manomboka ny fanarenana ny COVID-19 ary manohy ny dia mankany amin'ny fivoahana aotra. Miandrandra ny ho avy izay ahafahan'ny fiaramanidina miroborobo ao anatin'ny toekarena manerantany maharitra aho, ”hoy i Owens Thomsen.
Owens Thomsen dia manana mari-pahaizana PhD amin'ny Toekarena Iraisam-pirenena avy amin'ny The Graduate Institute any Genève ary MBA mitovy amin'ny University of Gothenburg ao amin'ny International Economics and Business. Mitana zom-pirenena amerikana, UK ary Soisa izy, niasa tany Angletera, Frantsa ary Soisa ary mahay miteny Soedoà, Anglisy ary Frantsay.
Owens Thomsen no nandimby an'i Brian Pearce izay nisotro ronono tamin'ny IATA tamin'ny fiandohan'ity taona ity taorian'ny naha-Chief Economist azy nanomboka tamin'ny 2004.